>Some Hackers sending out fake google email to steal passwords | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို - “သမ္မတကြီးအား စာအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံရန် ” ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍
>EU need to submit UNGA Draft to take action on Burma - sources told
>Some Hackers sending out fake google email to steal passwords
ဂူးဂဲကဟုဟန်ဆောင်ပြီး အီးမေးပတ်စ်ဝဒ်များကို ခိုးဖို့ ကြံစည်နေပြန်ပြီ
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ၊စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၁
အောက်ဖော်ပြပါစာများသင့်ဂျီးမေးအကောင်သို့ ၀င်လာပါက စာပြန်ခြင်း၊ သင့် အီးမေးအမည်၊ ပတ်စ်ဝဒ်စသည်တို့ကို ထုတ်ဖော်စာပြန်ခြင်းတို့ မလုပ်ရန်။ လုပ်မိပါက သင့်အီးမေးကိုမသမာသူ ဟက်ကာတို့က ဖောက်ထွင်းခိုးယူရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ကြောင်း သို့ဖြစ်၍ အမြန်ဆုံးအီးမေးပတ်စ်ဝဒ်ကို ပြောင်းပစ်ရန်။ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများကို လက်တို့သတိပေးထားရန်သတင်းပေးပို့အပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းကမိတ်ဆွေများက ထိုသို့အီးမေးမျိူးကို စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲပြီး စာပြန်ခြင်း၊အင်တာနက်ကဖေးများက အကူပေးသူများကို တဆင့်အကူအညီတောင်းပြီး စာပြန်ခိုင်းခြင်းတို့လုပ်ကြလေ့ရှိသဖြင့် အီးမေးများ အခိုးခံရသည့်အကြိမ် ပိုများတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
လုပ်ကြံထားသော လိမ်စာကိုအောက်မှာ ကြည့်ပါ။
“From: Gmail <google.notifier@inbox.lv>
Date: Thu, 01 Sep 2011 04:19:48 -0700
We make every effort to ensure that we provide the Ultimate Security
required for maximum protection of all our Email Account from unwanted
Users and spy wares. We do not want you to loose access to your
Account since your login information are no longer valid on our
database system. We need to confirm your profile details below for
verification purpose and to confirm that you own this account to avoid
Please answer each question as thoroughly and accurately as possible,
Your detailed answers will help us ensure that only you get access to
your account. In an effort to protect your privacy and keep your
information secure, if we detect unusual activity on the account, we
may disable it.